musha Asia Akasanganiswa Maartist Khabib Nurmagomedov Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya yeUFC Fighter yakatumidzwa zita rekuti "Gondo". Chakazara kufukidzwa kwaKhabib Nurmagomedov Wehucheche Nyaya, Biography, Vabereki, Chokwadi chemhuri, ruzivo rwehupenyu hwepakutanga, uye zvimwe zviitiko zvinozivikanwa kubva paudiki hwake nguva kusvika paakazova Gamba.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye anotyisa asingaremi anokwikwidza munyika panguva yekunyora. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Khabib Nurmagomedov's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Khabib Nurmagomedov Childhood Nyaya:
Kutanga kubva, Khabib Abdulmanapovich Nurmagomedov akazvarwa pazuva re20th yaGunyana 1988 kuSildi muRussia.
Ndiye wechipiri pavana vatatu akazvarwa kuna amai vake, Fatima uye kuna baba vake, Abdulmanap Nurmagomedov.
Sangana nemumwe wevabereki vaKhabib Nurmagomedov Abdulmanap.
Muvhenganiswa akasanganiswa wemauto ndeweRussia nyika neAvar Dagestani dzinza uye vekuMadokero kweEuropean mhuri mavambo. Akakurira kunzvimbo yekumaruwa yeKirovaul kuRussia kwaakakurira pamwe nehama, mukoma wake - Magomed Nurmagomedov uye munin'ina Amina.
Kukura kuKirovaul: Mufananidzo wehudiki wevechidiki Nurmagomedov.
Kurera mumhuri yepakati mhuri yepamberi yekugara paKirovaul nharaunda yekumaruwa, mudiki Nurmagomedov aive mwana anosevenzesa ane hunyanzvi akawana mazwi mukuita hunyanzvi hwekugadzira misiyano kumba uye muvakidzani.
“Khabib aive nehudiki hwakasimba, ndingati haana kugadzikana. Aigara achikwira miti, achisvetukira pamusoro peyadhi yevavakidzani uye zvese izvo. Aigara achifamba ”.
Anoyeuka Abdulmanap ehupenyu hwepakutanga hwemwanakomana wake.
Khabib Nurmagomedov Dzidzo:
Pakazosvika nguva Nurmagomedov akange ave zera ramakore masere, anga atove nehukasha hwekurwa muhondo.
Kutenda nekuona baba vake vachidzidzisa vadzidzi paburiro repasi pechivako chavo chema storey chakashandurwa kuita gym.
Zvisinei, zvaNurmagomedov zvakagadzirwa kutanga nekurwa sezvo zvaiwanzoitika kuvana vazhinji veKirovaul yekumaruwa.
Akadzidziswa nababa vake, Nurmagomedov akarekodha kusvetuka uye kumiganhu mumutambo uye akatomboita mutsimba nebere paakanga akura 9.
Wechidiki Khabib Nurmagomedov achirwa nebere achitarisirwa nababa vake.
Nurmagomedov akaenderera mberi nekutanga kudzidzira muJudo paakanga ave nemakore gumi nemashanu, shanduko iyo yekurwa nayo yakawana kunetsa asi yakanga isina sarudzo nekuti baba vake vakaona zvakakodzera kuti adzidze kurwa mujekete regi.
Hazvina kutora nguva refu baba vaNurmagomedov vakadzidzisawo uyo aive nemakore gumi nemanomwe-makore kuCombat Sambo ndokumupa rusununguko rwekuita mutsimba mumigwagwa.
Teenage Khvala Nurmagomedov akadzidziswa mune isingasviki matatu mitambo yekurwa nababa vake.
Khabib Nurmagomedov Upenyu hwepakutanga Hupenyu:
Paakarwa akawanda emumigwagwa, Nurmagomedov akashinga mukutenda kwake kuti mutambo wetsiva wakasanganiswa waive mutambo wekurwa uyo waaizoda kukwikwidza mukwenyanzvi.
Khabib Nurmagomedov akazivisa kugadzirira kwebasa rehunyanzvi muMMA mushure mekunatsa hunyanzvi hwake mukurwa mumugwagwa.
Saka, apo nguva yaive chaiyo Nurmagomedov akagadzira MMA yake kutanga muna2008 uye akatora mana akahwina mumwedzi mumwe! Mumakore matatu akatevera, Nurmagomedov akahwina mitambo gumi nemaviri inosanganisira mumakwikwi etsiva paakakwidza ProFC.
Khabib Nurmagomedov Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Kwapera nguva 2011 yakange yave nguva yekuchinja kwaNurmagomedov uyo "akarasika" kukunda kwakamubata chibvumirano neUltimate Fighting Championship (UFC).
Ndichiri kuUFC, Nurmagomedov aive simba risingamiswe kubva pamutambo wake wekutanga wakanangana naKamal Shalorus kutanga kwa2012 kusvika Kubvumbi 2014 paakakunda Rafael dos Anjos.
Pashure pacho, mutsiva wetsiva wekukurumidza akasimuka akave asina kukodzera kurwa. Asi izvo, aifanira kudzima makwikwi akati kuti pakati paGunyana 2014 na2015 nekuda kwehutano husina hutano kana zvinetso zvinobva mukuvhiyiwa kwebvi.
Khabib Nurmagomedov akamanikidzwa kukanzura kurwa kwakawanda nekuda kwekukuvara kwemabvi nembabvu.
Khabib Nurmagomedov Bio - Simuka Mukurumbira Nhau:
Yakanga isati yasvika gore ra2016 apo Nurmagomedov akadzoka kumutambo nekumakunda kukunda Darrell Horcher kuUFC.
Akachengetedza ruzha rwake mumitambo miviri inotevera uye akabuda seUFC Lightweight Champion paakakunda Al Iaquinta kuUFC 223.
Khabib Nurmagomedov akakunda Al Iaquinta kuhwina UFC lightweight zita.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora, Nurmagomedov ndiye anotonga UFC Lightweight Champion ine yakanakisa rekodhi ye28 kukunda uye hapana kurasikirwa.
Uku kukunda kwakauya mushure mekukunda Conor McGregor kwakatenderedza Zvita 2018. Iyo isingazivikanwe murwi (28-0) streak inomupa rekodhi yekuve iyo yakarebesa inoshanda isina kukundwa mutsara muMMA. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Khabib Nurmagomedov Hukama Hupenyu:
Achienderera kuhupenyu hwerudo hwaNurmagomedov, iye haana kuroora panguva yekunyora kana kudanana nemusikana. Mutambi wenhabvu arikunakidzwa nehukama hwewanano nemukadzi wake Patimat.
Hazvina zvakawanda zvaizivikanwa nezvemukadzi waKhabib Nurmagomedov - Patimat - asides zita rake. Muchokwadi, kumeso kwake hakuna kuratidzwa pazuva remuchato wavo uye Nurmagomedov haagovane mafoto ake ake pasocial media.
Mukadzi waKhabib Nurmagomedov haasati amboonekwa asina kupfeka.
Vakaroorana vakatanga seshamwari dzehucheche uye vakanamatira kune mumwe pamusoro pemakore kusvika muchato. Nekudaro, haisi roketi sainzi yekuti nei Nurmagomedov anga asina musikana weveruzhinji pamberi pePatimat.
Kubatana kwavo kwakakomborerwa nevana vaviri. Mwanasikana anonzi Fatima (akazvarwa musi wa1 Chikumi 2015) uye mwanakomana anozivikanwa saMagomed (akazvarwa Zvita 2017).
Khabib Nurmagomedov Hupenyu Hwemhuri:
Wese munhu ane mhuri, pane zvinhu zvakakosha kwazvo muhupenyu. Tinokuunzira chokwadi nezve nhengo dzemhuri yaKhabib Nurmagomedov kutanga nevabereki vake.
Nezve amai vaKhabib Nurmagomedov:
Fatima ndiye ane rudo uye anotsigira amai vehondo yehondo. Anogara achimuteerera uye achibvuma kuti anogara achiuya pekutanga muzvinhu zvemoyo wake.
Nekudaro, zviri pachena kuti Fatima ndiye anonyanya kufarira vabereki vaKhabib Nurmagomedov. Tsigiro yake isingazivikanwe muhupenyu nekusimuka kwemwanakomana wake wechipiri ichave inokosheswa naye nekusingaperi.
Nezve baba vaKhabib Nurmagomedov:
Kutanga nemufananidzo wemhuri yeKhabib Nurmagomedov ndibaba vake - Abdulmanap Nurmagomedov.
Iye murwi weRussia wemauto uyezve murairidzi anoremekedzwa uyo akabatsira kudzora vechidiki vazhinji kubva pakuita mhirizhonga nekuisa simba ravo rehasha mumitambo yekurwa.
Nurmagomedov anomupa mbiri yekuva chirango uyo anogara achitsvaga kuburitsa zvakanakisa maari.
Khabib Nurmagomedov nababa vake Abdulmanap.
Nezve hama dzaKhabib Nurmagomedov:
Khabib ane vanin'ina vaviri chete. Ivo vanosanganisira mukoma wake mukuru Magomed Nurmagomedov uye munun'una wake Amina. Magomed zvakare musanganiswa wemauto.
Nekudaro, iye achiri kutanga kune chero epamberi yekurwira sangano panguva yekunyora. Kudivi rake, Kwete zvakawanda zvinozivikanwa nezvaAmina uyo akavanzwa kubva kuruzhinji sevanhukadzi vazhinji vemhuri yaKhabib Nurmagomedov.
Kure kure nevabereki vaKhabib Nurmagomedov uye nevanin'ina vake, hazvisi zvakawanda zvinozivikanwa nezvevamiriri vehondo yemhuri kana madzitateguru, kunyanya sekuru naamai vake pamwe nasekuru nasekuru nasekuru vake.
Saizvozvo, hapana marekodhi amaiguru nababamunini vaNurmagomedov nepo babamunini vake uye nanasekuru vake vachiri kuzozivikanwa panguva yekunyora. Nekudaro, Khabib ane hama zhinji dzinozivikanwa pakati pavo ndiOmar Nurmagomedov ari kugadzirawo masaisai muMMA.
Sangana nehama yaKhabib Nurmagomedov anonzi Omar.
Khabib Nurmagomedov Hupenyu hweMunhu:
Kure nekubasa kwake kwe-net, Khabib Nurmagomedov ane humwe hunhu hukuru hunosanganisa hwakangwara, hunyanzvi, hune moyo uye unoshanda hunhu hweVirgo zodiac hunhu nehunhu hwakanaka.
Pamusoro pezvo, haawanzo kuburitsa pachena nezve hupenyu hwake hwepachivande uye hwepamoyo nepo zviitiko zvinoumba zvinomufadza uye zvaanofarira zvinosanganisira kutarisa & kutamba mitambo yenhabvu, kufamba uye kushandisa nguva yakanaka nemhuri yake neshamwari.
Khabib Nurmagomedov anofarira zvebhora. Iye akafananidzirwa pano achivhura mutambo wenhabvu muRussia.
Khabib Nurmagomedov Mararamiro:
Iwe unoziva here kuti Khabib Nurmagomedov mambure akakosha anomira pamari inofungidzirwa yemadhora 11.5million panguva yekunyora iyi biography?
Kugovera hova dzaNurmagomedov inokurumidza-kukwira mambure akakosha imibairo yake kubva mukuhwina mabheji pamwe nemari inowanikwa kubva kuzvibvumirano zvekubvumidza.
Nekuda kweizvozvo, iyo MMA nyeredzi haidi kuputsa mabhangi kuitira kuti urarame hupenyu hwoumbozha. Kunyangwe kukosha kweimba yaNurmagomedov kuMakhachkala (guta guru reDagestan) kuchiri kusazivikanwa, ane mota dzekunze dzinogadzirwa nemhando dzakadai seMercedes, Ferrari, Toyota pakati pevamwe.
Chiratidzo cheMhando yepamusoro yehupenyu. UFC Fighter inomira padyo nemotokari yake yemhando yepamusoro yeMercedes-AMG GT.
Chiratidzo chehupenyu hwemhando yepamusoro. UFC Fighter inomira padivi pemotokari yake yeMercedes-AMG GT. Chikwereti: ChaizvoizvoSports.
Khabib Nurmagomedov Chokwadi:
Kuputira yedu Khabib Nurmagomedov nyaya yehucheche uye biography, tinopa zvishoma zvinozivikanwa kana zvisingataurike chokwadi pamusoro peakavhenganiswa wehondo.
Chitendero: Pakutanga, vabereki vaKhabib Nurmagomedov vakamutungamira pakuva mutungamiriri wechitendero akasanganiswa nehondo. Muchokwadi, iye ari kuita Sunni Muslim weShafi'i system yekutonga.
Waizviziva here?… Mufaro mhuri yaKhabib Nurmagomedov yaisaziva kusunga panguva Khabib akatyora nhoroondo yekuve muslim wekutanga kuhwina mukombe weUFC. Kamaru Usman, mumwe mumhanyi wechiMuslim UFC anotevera.
About Nurmagomedov hwigi: Nurmagomedov inowanzopfeka wanda yeapakha mushure mekurwa uye panguva yekusimudzira nekuti chikamu chetsika yake yeDagestani Avar. mune yeDagestanian tsika, iyo wig inoshandiswa nemasoja kuchengetedza musoro wavo unodziya.
Waizviziva here?… Khabib's papakha wig ine kukosha kwetsika.
Tattoos: Pamwe haana kubatana nechitendero chake, Nurmagomedov haana nyora uye haarove mafeni senge anowana imwe mune ramangwana. Ari pachinzvimbo chekudada nekumira akareba - pakukwirira kwemashanu tsoka gumi mainji - sekusikwa kwaakaitwa.
Mitauro Inotaurwa: Unoziva here kuti Khabib Nurmagomedov mumwe pakati vashoma UFC varwi vanotaura mitauro yakati wandei. Mitauro yacho inosanganisira Avar, Chirungu, Russian, Turkish, uye Arabic.
Iye murwi ane rairo yakanaka yemitauro mishanu.
Kusvuta uye kunwa: Kuva muMuslim akazvipira, Nurmagomedov haamwi kana kuputa nekuti zvinopesana nechitendero chake. zvimwe chetezvo, anotsigira avo vanogara mune tsika yakadai kusimbisa kuti vanhu vanofanirwa kurarama zvine mutsindo.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Khabib Nurmagomedov Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!